Manamafy ny fifehezana sisintany ao Myanmar i Thailand noho ny COVID-19
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Manamafy ny fifehezana sisintany ao Myanmar i Thailand noho ny COVID-19
Manamafy ny sisin-tanin'i Myanmar i Thailand
Dr. Tanarak Plipat, tale jeneraly lefitry ny sampan-draharaha misahana ny fanaraha-maso ny aretina any Thailand, dia nilaza fa ny COVID-19 toe-javatra any Myanmar misy fiatraikany mivantana amin'ny ezak'i Thailandy hifehezana ny valanaretina coronavirus satria manamafy ny fanaraha-maso ny sisintany ao Myanmar i Thailand.
Any Myanmar ankehitriny, tranga COVID-19 sy maty no miakatra sy miakatra isan'andro. Talohan'izay dia nisoroka ny ankamaroan'ny COVID-19 ny firenena raha oharina amin'ireo mpifanila vodirindrina aminy atsimo atsinanana izay nandehanan'ny virus coronavirus nandritra ity areti-mandringana ity.
Na dia ambany aza ny taham-pahafatesana - manodidina ny 1 isaky ny olona 100,000 7 - dia mihanaka ankehitriny ny viriosy. Iray volana lasa izay, olona 19 no matin'ny COVID-530; Androany ny isan'ny maty dia tafakatra 1,400. Hatramin'ny alarobia lasa teo dia tranga vaovao 22,000 no voalaza fa tamin'io andro io izay nahatratra XNUMX ny tontaliny.
Hatramin'izao, Thailand dia nandrakitra tranga 3,634 miabo COVID-19 ary maty 59.
Lehiben'ny mpiasa ao amin'ny Tafika faha-4 Thai Jeneraly Pramote Phrom-in dia nilaza fa nanamafy ny fampiharana ny sisin-tany sy ny sisin-dranomasina ny manampahefana misahana ny fiarovana mba hisorohana ireo vahiny avy any Malezia hiditra ao amin'ilay fanjakana.
“Ny fisafoana ataon'ireo manampahefana Thailandey sy Maleziana fiarovana dia niteraka fidinana an-tsokosoko tamin'ny isan'ny fiampitana tsy ara-dalàna manamorona ny sisintanin'i Thailand-Malaysia. Hatramin'ny onja vaovaon'ny fihanaky ny COVID-19 (any Malezia), tranga vitsivitsy monja tamin'ny fidirana tsy ara-dalàna no notaterina », hoy ny Jeneraly Jeneraly tamin'ny Bernam National News Agency i Bernama.
Nilaza i Dr. Plipat fa raha navela hiditra ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna, Thailand dia mety hahita ny trangan'aretina virus coronavirus tafakatra 6,000 ny totaliny.
Raha ny filazan'ny Ivotoerana fitantanan-draharaha COVID-19 (CCSA) dia ny isan'ireo maty tao Myanmar no fahatelo lehibe indrindra tany Azia atsimo atsinanana aorian'ny Indonezia sy Filipina.
Ny CCSA dia nanoritsoritra vondrona mpitsidika vahiny 5 izay avela hiditra ao amin'ny firenena:
• Atleta vahiny amin'ny hetsika iraisam-pirenena voatondro
• Tompon'ny visa tsy mpifindra monina
• Mpizahatany maharitra amin'ny Visa momba ny fizahan-tany manokana (STV)
• Mpihazona karatra APEC
• Ireo olona maniry ny hijanona mandritra ny fotoana fohy sy maharitra any Thailand
Ny CCSA koa dia nametraka torolàlana momba ny quarantine ho an'ny mpanamory fiaramanidina THAI Airways sy ny ekipa miasa amin'ny sidina fampodiana an-tanindrazana.
Ireo vahiny mitady fotoana fohy sy maharitra any Thailand dia tsy maintsy manaporofo fa manana 500,000 baht farafahakeliny ao amin'ny kaontiny any amin'ny banky izy ireo nandritra izay 6 volana izay.
SUNx Malta dia miaina miaraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro
Ny Air Canada sy ny Transat AT Inc. dia namarana ny fifanakalozana ho an'ny orinasa roa